सुताईबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ पार्टनरले तपाईलाई कति माया गर्दछन् ? - jagritikhabar.com
सुताईबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ पार्टनरले तपाईलाई कति माया गर्दछन् ?
विवाहको सुरु सुरुमा त नयाँ जोडीले एक अर्कालाई अंगालोमा बेरेर सुत्ने गर्दछन्। तर विवाहको केही वर्षपछि पनि तपाईको पार्टनर यसैगरी सुत्ने गर्दछन् भने त्यो त खुसीको कुरा हो । तर यस्तो छैन भने तपाईको सम्बन्धमा कुनै गडबढी अवश्य छ।
विवाहको १०, १५ वर्षपछि तपाईको पार्टनर तपाईसँग टाँसिर सुत्न जरुरी छैन्, तर सुत्ने समयमा तपाई र तपाईको पार्टनरको अनुहार एक अर्कातिर फर्काएर सुत्नु पर्दछ। यसरी सुत्ने पार्टनरले तपाईलाई निकै प्रेम गर्ने गर्दछन्।